Q-yakachinjika Makristasi Fekitori - China Q-yakachinjika Makristani Vagadziri, Vatengesi
Kubatsira dhizaini compact uye inovimbika solid state laser masosi, DIEN TECH inopa akateedzana e-anoshandura Q-switching makristasi kuenzanisa masisitimu, kusanganisira Co2 +: MgAl2O4 (Co: Spinel), iyo inoburitsa kubva 1.2 kusvika 1.6μm, kunyanya, yeziso. -safe 1.54μm Er: girazi laser, asi zvakare rinoshanda pa1.44μm uye 1.34μm laser wavelengths.Cr4 +: YAG, ari akakodzera zvinhu zveNd: YAG nedzimwe Nd uye Yb doped lasers muhurefu hwehurefu hwe0.8 kusvika 1.2um. Iko kugadzikana kwepamusoro uye kuvimbika, hupenyu hwakareba hwebasa uye yakanyanya kukuvara chikumbaridzo.
KD * P EO Q-Chinja
EO Q Chinja chinoshandura iyo polarization nyika yechiedza ichipfuura napo kana iyo yakashandiswa voltage inokonzeresa birefringence shanduko mune ye electro-optic kristaro senge KD * P. Kana ikashandiswa pamwe chete nemapolarizer, aya maseru anogona kushanda seanoshandura switch, kana laser Q-switch.
RTP (Rubidium Titanyle Phosphate - RbTiOPO4) inyaya ikozvino inoshandiswa zvakanyanya kune Electro Optical kunyorera pese panodiwa kudzika kwemagetsi.
Passive Q-switch kana inogadzikana yekubata inogadzira yakakwira simba laser pulses pasina kushandisa electro-optic Q-switch, nokudaro ichideredza saizi yepakeji uye kubvisa yakakwira magetsi magetsi. Co2+: MgAl2O4 inyaya nyowani nyowani yekungoita Q-switching mu lasers inoburitsa kubva 1.2 kusvika 1.6μm, kunyanya, kune ziso-rakachengeteka 1.54μm Er: girazi laser, asi zvakare rinoshanda pa1.44μm uye 1.34μm laser wavelengths. Spinel yakaoma, yakagadzika kristaro inopukuta mushe.
Cr4 +: YAG chinhu chakanakira kungoita Q-switching yeNd: YAG uye mamwe Nd uye Yb doped lasers muhurefu hwehurefu hwe0.8 kusvika 1.2um.Ihwo hwakasimba kugadzikana uye kuvimbika, hupenyu hwakareba hwebasa uye yakanyanya kukuvara chikumbaridzo.